Diyopost.com :: मन्डला नाटक घरमा ध्रुव सत्य परियारद्वारा लिखित नाटक जालिनी मञ्चन मन्डला नाटक घरमा ध्रुव सत्य परियारद्वारा लिखित नाटक जालिनी मञ्चन - Diyopost.com
मन्डला नाटक घरमा ध्रुव सत्य परियारद्वारा लिखित नाटक जालिनी मञ्चन
काठमाडौं, २९ भदौ । कथाकार ध्रव सत्य परियारद्वारा लिखित नाटक जालिनीको मञ्चन भएको छ ।
राजधानीको मन्डला थिएटरमा शुक्रबार नियमित समयमा परियारद्वारा लिखित नाटक मञ्चन भएको हो ।
लोककथा शैलीमा लेखिएको नाटक जालिनी परियारद्वारा लिखित कथा संग्रह कैरनमा समेत समावेश गरिएको थियो ।
चर्चित चलचित्र नायक तथा निर्देशक दयाहाङद्वारा निर्देशत नाटक हेर्न शुक्रबार साँझ अनामनगरस्थित मन्डला थिएटरमा ठूलो घुँइचो लागेको थियो ।
‘जालिनी राजारानी, राजकाुमार–राजकुमारी, वीर–वीरांगना, बुद्धिमान महिला तथा वृद्धा र चतुरु बालबालिकाको कथा, अलौकिक पात्र, परिवेश वा घटना, नीति शिक्षा लोककथाको विशेषता हो,’ लेखक परियारले भने,‘लोककथा वा पौराणिक कथाले लोक विश्वास, अन्धविश्वास, धार्मिक चिन्तन वा अनुष्ठान बोलेको हुन्छ । हाम्रो मानसिकता निर्माण हुनुमा पनि लोककथा, पौराणिक कथा, किंबदन्तिी वा धर्म–संस्कृतिको भव्य भूमिका हुन्छ ।’
परियारका अनुसार जालिनीको शाब्दिक अर्थ हुन्छ–चित्रशाला । ‘कुनै कालखण्डमा स्त्रीका नैसर्गिक अधिकार, स्वतन्त्रता, सपना र विवेकलाई कसरी घर वा पर्दालभित्र कैद गरियो ? शासक, उसका मतियार र आसेपासेले कसरी कुसंस्कार पनि निर्माण गरे ? उनीहरुले कसरी एउटा वर्गलाई भूमिहिन र दास बनाए ? त्यसले आजको समाजलाई के कति असर गरेको छ,’ प्रश्न गर्दै परियारले भने,‘यसबारे आजका मानिसलाई सोच्ने बनाउनु जालिनी कथाको ध्येय हो । कथा वा कथानक आफैँमा चिन होइन, यसले तपाईंको मस्तिष्कमा कुनै चित्र दिने हो । निश्चय नै त्यो चित्र वा दृष्य कथाले भन्दा बढी नाटकले दिन्छ ।’
निर्देशक दयाहाङ राईले आफूले यस्तो नाटक निर्देशन गर्न निकै ठूलो हिम्मत गर्नु परेको बताए ।
‘कैरन कथा संग्रह पढिसकेपछि म भित्र धेरै कथाका धेरै दृष्यहरु चल्मलाउन थाले । सीधै नाटक बनाउँछु भन्ने लाग्यो तर कुन कथामाथि नाटक बनाउने भन्न निश्चित भइसकेको थिएन,’ राईले भने,‘ध्रुवसत्यसँग पुरानै संगत भए पनि मेरो योजना सुनाउन आँट गरिन किन भने ध्रुवसत्यले जे भन्नु थियो उसले भनिसक्यो । अबमैले अर्को माध्यमबाट भन्दा त्यसरी स्पष्ट भन्न नसकुलाँ । आफूलाई रोकेर बाँधेर राखे । तर मेरो भोगाई र चेतले भनिरह्यो–नाटकको माध्यमबाट पनि त्यो कथा भन् । फेरी कथाहरुबाट एउटा कथा छान्न थाले र हामी मण्डला टिमले छान्यौं ‘जालिनी’ ।’
नाटक जालिनिमा नायिका श्रजना सुब्बा वृद्धा र जलजलाको भूमिकामा छिन् । यता राजा जयस्थितिको भूमिकामा भने चर्चित कलाकार विजय बराल छन् । राजकूमारी जालिनीको भूमिकामा बिनिता गुरुङ, प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा इँगिहोपो कोइँच सुनुवार, जयनको भूमिकामा पुष्कर कार्की, ज्योतिषीहरुको भूमिकामा सागर दाहाल, विकाश पन्त, सन्जिव राई, दिपक पछलदग्या रहेका छन् । सुसारेहरुको भूमिकामा प्रमिला खनाल, शकु साह रहेका छन् भने सिपाहीहरुको भूमिकामा सुदिप खतिवडा, विक्रम श्रेष्ठ, रिजन परियार, कविराज राई, सविन घलना र देविन चौधरी रहेका छन् ।
दर्शकलाई टिसट उपहार !
जालिनी नाटक मञ्चनको पहिलो दिन एक दर्शकलाई टिसट समेत उपहार दिइएको थियो । गोला प्रथाबाट धादिङकी सुनिता सुन्दासलाई जालिनी नाटकको ‘ट्याग’ रहेको टिसट उपहार हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सम्भव छ ‘सेक्स भिडियो’ प्रतिवन्ध ?
काठमाडौं, असोज ७ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले ‘पोर्न साईड’ प्रतिवन्ध लगाउने भएको छ । मन्त्रालयले यस्ता वेबसाईट ...
अश्लिल वेबसाइट बन्द गराउदै सरकार !
काठमाडौं, असोज ६ । सरकारले यौनजन्य अश्लील सामाग्री प्रकाशन गर्ने वेबसाइट बन्द गराउने भएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट यौनजन्य अश्लील ...
सुपस्टार भुवन केसीले पुर्व पत्नी सुस्मितालाई दिए वैवाहिक जिवनको शुभकामना !
काठमाडौं, भदौ ३१ । अभिनेता भुवन केसीकी पुर्व पत्नी सुस्मिता बम्जन (केसी) लाई नयाँ बैबाहिक जीवनको सुभकामना दिनुभएको छ । ...
कलाकार बिन स्वीमिङपुलमा नाङगै भेटिएपछि….! (हेर्नुहोस् भिडियोमा)
सिन्धुपाल्चोकमा गोरुले दुध दिएपछि ….! (भिडियोसहित)
सिन्धुपाल्चोक । भनाई नै छ,–‘गोरु ब्याउँदैन, दुध पनि दिँदैन ।’ तर, यतिबेला सिन्धुपाल्चोक स्थित हेलम्बु गाउँपालिकाको ईचोक पुराना गाउँका सोनाम ...
मिस टुरिजम–२०१८ को उपाधी मनितालाई
काठमाडौ भदौ ९ टुरिजम–२०१८ को उपाधी भक्तपुरकी मनिता पौडेलले जितेकी छन् । शनिवार भएको अन्तिम प्रतिस्पर्धाका १२ प्रतियोगीलाई उछिन्दै पौडेलले ...
नेपाल आईडल सिजन २ का यी तिन प्रतिभावान स्वरहरु जसले पाए ‘गोल्डेन माइक्रोफोन’
काठमाडौँ । गत वर्षदेखी शुरु भएको अन्तराष्ट्रिय स्तरको गायन प्रतियोगिता नेपाल आईडल सिजन २ सम्म आईपुगेको छ । बुद्ध लामा, ...
‘मिस्टर भर्जिन’लाई उपत्यका बाहिर थपियो २३ सिनेमा हल, उत्साहजनक प्रतिक्रियाको ओइरो
गत शुक्रवारबाट एकसाथ ४ नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आए । चार नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदा व्यापार र दर्शक बाढिने पक्का नै ...